သံဝေဇနိယလေးဌာန (ကျမ်းကို မဟာပရိနိဗ္ဗာန်နသုတ္တန်မှ ရေးဖွဲပူဇော်သည်) – Sharing
သံဝေဇနိယလေးဌာန (ကျမ်းကို မဟာပရိနိဗ္ဗာန်နသုတ္တန်မှ ရေးဖွဲပူဇော်သည်)
Dr Mrs Mg | January 3, 2020 | ဗဟုသုတ | No Comments
ရှင်တော်မြတ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူခါနီး အချိန် အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်က မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှား ရှိတုန်းကဆို ဝါတွင်းကာလ ကုန်ဆုံးလို သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုရင် ထိုထိုအရပ်က ရဟန်းသံဃာတွေဟာ ဘုရားဖူးရန် ကြွတော်မူလာကြပြီ ဆိုရင် #မနောဘာဝိနိယ မထေရ်ကြီးများ သာသနာတော်မှာ
တကယ်ကို သဒ္ဓါတရားဖြစ်ပွား စေတဲ့ ထေရ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ တပည့်တော် ဖူးမျှော်ခွင့်ရတယ်ဘုရား ရှင်တော်ဘုရားသာ မရှိတော့ဘူးဆိုရင်…ဒီလို သာသနာမှာ သဒ္ဓါဖြစ်စေနိုင် တဲ့ မထေရ်ကြီး ဖူးမျှော်ခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဘုရား…
ဒီတော့ မြတ်စွာဘုရားက အာနန္ဒာ အားမငယ်လေနဲ့ ငါဘုရားမရှိတော့တဲ့နောက် သဒ္ဓါတရား ရှိကြတဲ့ ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ တွေဟာ #သံဝေဇနိယလေးဌာန ငါဘုရားနဲ့ စပ်လျင်ပြီး သံဝေဂ ဖြစ်စေမဲ့ နေရာ လေးဌာနရှိတယ် ထိုလေးဌာနကို သဒ္ဓါတရားနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ငါရဲ့တပည့်ပရိတ်သတ် လေးပါးဟာ ထိုအရပ်ဒေသကို လာရောက်ဖူးမျှော်ကာ သံဝေဂတရား ပွားများပြီး သေသောအခါ နတ်ရွာသုဂတိ ရောက်ကြလိမ့်မည် ချစ်းသား အာနန္ဒာ…
၁။ အလောင်းတော်မြတ် ဖွားတော်မူရာ #လုမ္ဗိနီဥယျာဉ် ထို သဒ္ဓါတရား ရှိကြတဲ့ ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူတို့ဟာ ဒီနေရာဒေသကို ရောက်လာပြီ သြော် ဒီနေရာသည်ကား ငါတို့ရဲ့ ဆရာ မြတ်စွာဘုရား ဖွားတော်မူရာအရပ်ဘဲ့ အခုတော့ ဘုရားမရှိတော့ပြီ မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူတဲ့ အတိုင်းဘဲ့ ဘယ်အရာမှ မမြဲပါလား အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ပါတကား…
၂။ ဘုရားဖြစ်တော်မူရာ #မဟာဗောဓိပင်(ဗောဓိမဏ္ဍိန်)
အရပ် သြော် ဒီနေရာသည်ကား ငါတို့ရဲ့ဆရာဘုရား ဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သိနေရာ လောကသုံးပါးရဲ့ အတုမဲ့ ဗုဒ္ဓ မရှိတော့ပြီး ဘယ်အရာမှ မမြဲပါလား ဝယဓမ္မာ သင်္ခါရ အရာအားလုံးဟာ ဖြစ်ပြီရင် ပျက်သွားတာပါလား အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ…
၃။ တရားဦးဓမ္မစက် ဟောတော်မူရာ #ဣသိပတနမိဂဒါဝုန် တော ဤအရပ်သည်ကား ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီ သုံးလအကြာ “ဒွေ’ မေ ဘိက္ခဝေ အန္တာ ပဗ္ဗဇိတေန န သေဝိတဗ္ဗာ။ စသည့် တရားဦး စမ္မစက်စတင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်နေရာ အနိစ္စ မမြဲ ဒုက္ခ ဆင်းရဲ၏ အနတ္တ ဘယ်အရာမှ အစိုးမရလေကုန်…
၄။ မဟာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူရာ #မလ္လတိုင်းကုသိနာရုံအင်ကြင်တော အရပ် ဤအရပ်သည်ကား ရှင်တော်မြတ်ဘုရား ဗုဒ္ဓကိစ္စ အလုံးစုံပြီးဆုံးလို နောက်ဆုံး #သဗ္ဗေသင်္ခါရာအနိစ္စ. အလုံးစုံသောတရားတွေသည် ဖြစ်ပေါ်ပြီလျှင် နောက်ဆုံး ပျက်ဆီးရသည်ချည်းသာတည်း အခုလို သီလ သမာဓိ ပညာ အရာ လောကမှာ သာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် မပြောနဲ့ တူတဲ့
ပုဂ္ဂိုလ်တောင် မရှိတဲ့ လောကသုံးပါးရဲ့ ဆရာဘုရားတောင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံရသေးတာဘဲ့ ငါတို့ဆိုလျှင် ဆိုဖွယ်ရှိမလည်း သြော် လောကမှာ ဘယ်အရာမှ မမြဲပါလားဟု သံဝေဂတရားပွားများပြီး ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ကောင်းရာသုဂတိရောက်လိမ့်မည် ချစ်းသား အာနန္ဒာ…
ကျမ်းကို မဟာပရိနိဗ္ဗာန်နသုတ္တန်မှ ရေးဖွဲပူဇော်သည် #Credit ;Original
ရှငျတျောမွတျဘုရားပရိနိဗ်ဗာနျစံတျောမူခါနီး အခြိနျ အရှငျအာနန်ဒာမထရျေမွတျက မွတျစှာဘုရား သကျတျောထငျရှား ရှိတုနျးကဆို ဝါတှငျးကာလ ကုနျဆုံးလို သီတငျးကြှတျပွီဆိုရငျ ထိုထိုအရပျက ရဟနျးသံဃာတှဟော ဘုရားဖူးရနျ ကွှတျောမူလာကွပွီ ဆိုရငျ #မနောဘာဝိနိယ မထရျေကွီးမြား သာသနာတျောမှာ
တကယျကို သဒ်ဓါတရားဖွဈပှား စတေဲ့ ထရျေဆိုတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျထူးမြား တပညျ့တျော ဖူးမြှျောခှငျ့ရတယျဘုရား ရှငျတျောဘုရားသာ မရှိတော့ဘူးဆိုရငျ…ဒီလို သာသနာမှာ သဒ်ဓါဖွဈစနေိုငျ တဲ့ မထရျေကွီး ဖူးမြှျောခှငျ့ရတော့မှာ မဟုတျဘူး ဘုရား…
ဒီတော့ မွတျစှာဘုရားက အာနန်ဒာ အားမငယျလနေဲ့ ငါဘုရားမရှိတော့တဲ့နောကျ သဒ်ဓါတရား ရှိကွတဲ့ ရဟနျး၊ ရှငျ၊ လူ တှဟော #သံဝဇေနိယလေးဌာန ငါဘုရားနဲ့ စပျလငျြပွီး သံဝဂေ ဖွဈစမေဲ့ နရော လေးဌာနရှိတယျ ထိုလေးဌာနကို သဒ်ဓါတရားနဲ့ ပွညျ့စုံတဲ့ ငါရဲ့တပညျ့ပရိတျသတျ လေးပါးဟာ ထိုအရပျဒသေကို လာရောကျဖူးမြှျောကာ သံဝဂေတရား ပှားမြားပွီး သသေောအခါ နတျရှာသုဂတိ ရောကျကွလိမျ့မညျ ခဈြးသား အာနန်ဒာ…
၁။ အလောငျးတျောမွတျ ဖှားတျောမူရာ #လုမ်ဗိနီဥယြာဉျ ထို သဒ်ဓါတရား ရှိကွတဲ့ ရဟနျး၊ ရှငျ၊ လူတို့ဟာ ဒီနရောဒသေကို ရောကျလာပွီ သွျော ဒီနရောသညျကား ငါတို့ရဲ့ ဆရာ မွတျစှာဘုရား ဖှားတျောမူရာအရပျဘဲ့ အခုတော့ ဘုရားမရှိတော့ပွီ မွတျစှာဘုရား ဟောတျောမူတဲ့ အတိုငျးဘဲ့ ဘယျအရာမှ မမွဲပါလား အနိစ်စ ဒုက်ခ အနတ်တ ပါတကား…
၂။ ဘုရားဖွဈတျောမူရာ #မဟာဗောဓိပငျ(ဗောဓိမဏ်ဍိနျ)
အရပျ သွျော ဒီနရောသညျကား ငါတို့ရဲ့ဆရာဘုရား ဗုဒ်ဓအဖွဈသို့ ရောကျရှိခဲ့သိနရော လောကသုံးပါးရဲ့ အတုမဲ့ ဗုဒ်ဓ မရှိတော့ပွီး ဘယျအရာမှ မမွဲပါလား ဝယဓမ်မာ သင်ျခါရ အရာအားလုံးဟာ ဖွဈပွီရငျ ပကျြသှားတာပါလား အနိစ်စ ဒုက်ခ အနတ်တ…
၃။ တရားဦးဓမ်မစကျ ဟောတျောမူရာ #ဣသိပတနမိဂဒါဝုနျ တော ဤအရပျသညျကား ဘုရားဖွဈတျောမူပွီ သုံးလအကွာ “ဒှေ’ မေ ဘိက်ခဝေ အန်တာ ပဗ်ဗဇိတနေ န သဝေိတဗ်ဗာ။ စသညျ့ တရားဦး စမ်မစကျစတငျဟောကွားတျောမူခဲ့သညျ့နရော အနိစ်စ မမွဲ ဒုက်ခ ဆငျးရဲ၏ အနတ်တ ဘယျအရာမှ အစိုးမရလကေုနျ…
၄။ မဟာပရိနိဗ်ဗာနျစံတျောမူရာ #မလ်လတိုငျးကုသိနာရုံအငျကွငျတော အရပျ ဤအရပျသညျကား ရှငျတျောမွတျဘုရား ဗုဒ်ဓကိစ်စ အလုံးစုံပွီးဆုံးလို နောကျဆုံး #သဗ်ဗသေင်ျခါရာအနိစ်စ. အလုံးစုံသောတရားတှသေညျ ဖွဈပျေါပွီလြှငျ နောကျဆုံး ပကျြဆီးရသညျခညျြးသာတညျး အခုလို သီလ သမာဓိ ပညာ အရာ လောကမှာ သာတဲ့
ပုဂ်ဂိုလျ မပွောနဲ့ တူတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတောငျ မရှိတဲ့ လောကသုံးပါးရဲ့ ဆရာဘုရားတောငျ ပရိနိဗ်ဗာနျစံရသေးတာဘဲ့ ငါတို့ဆိုလြှငျ ဆိုဖှယျရှိမလညျး သွျော လောကမှာ ဘယျအရာမှ မမွဲပါလားဟု သံဝဂေတရားပှားမြားပွီး ထိုပုဂ်ဂိုလျတှဟော ကောငျးရာသုဂတိရောကျလိမျ့မညျ ခဈြးသား အာနန်ဒာ…
ကမျြးကို မဟာပရိနိဗ်ဗာနျနသုတ်တနျမှ ရေးဖှဲပူဇျောသညျ #Credit ;Original